Free Fire လမ်းမပေါ်မှ Heroic ဆီသို့ : Rank မြန်မြန်တက်ဖို့နည်းလမ်းများ | Codashop Blog MM
Home Games Free Fire Free Fire လမ်...
Free Fire လမ်းမပေါ်မှ Heroic ဆီသို့ : Rank မြန်မြန်တက်ဖို့နည်းလမ်းများ
Battle Royale ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေတော်တော်များများလိုပဲ Free Fire ရဲ့ ပုံစံကလည်း ဂိမ်းဆော့ရာမှာ ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင် ranking system ပါပါတယ်။ ကစားသမား ၅၀ကိုလေယာဉ်ပေါ်ကနေ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်ပစ်ချလိုက်ပြီး လက်နက်တွေရှာ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့သူကိုယ်ဖြစ်အောင် တိုက်ခိုက်ရတာပေါ့။ နိုင်တဲ့သူတွေက နောက်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့ tier ကိုတက်နိုင်တဲ့ ranking points တွေရတာပေါ့။
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ သင့်အတွက် Bronze ကနေ Heroic ထိ အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ ပန်းကန်လုံးစီးပြီး ရောက်နိုင်အောင် နည်းလမ်းအချို့ဝေမျှချင်ပါတယ်။
Free Fire ranking စနစ်
ကစားသူတွေဟာ Ranked mode ကို level 8 ရောက်တာနဲ့ စဆော့လို့ရပါပြီ။ Classic ပွဲတွေကို အတွေ့အကြုံရှိအောင်နဲ့ ကျင့်သားရအောင်ဆော့ပေးပါ။ ဝင်ရောက်ကစားခြင်းဖြင့် ကစားသူတွေကို ranking points တွေပေးပြီး သူတို့ rank လှေကားကြီးအပေါ်ကိုဆက်တက်နိုင်အောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ 20% အပိုဆောင်းအနေနဲ့ ငွေသားနဲ့ EXP (အမြန်နည်းလို့လဲပြောနိုင်တာပေါ့) တွေကိုလည်းထပ်ရပါသေးတယ်။ ပိုမြင့်လာတဲ့ tiers တွေရောက်ရင်တော့ ပိုကြမ်းတဲ့လုံးဝထိပ်တန်းကစားသမားတွေဆီက စိန်ခေါ်မှုတွေကိုမျှော်လင့်စောင့်စားလိုက်ပါ။
ဒါကတော့ rank အလိုက် သူတို့ရဲ့ tier တွေအကြောင်းအမြန်ရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အစောပိုင်း Early Game
ကိုယ် land မယ့်နေရာကိုကြိုတင်ပြီးမဟာဗျူဟာချထားမှ early game မှာ ကိုယ်ဘယ်လိုရွေ့လျားမယ်ဆိုတာကို သေချာလေး plan နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြေပုံကိုနားလည်ပြီး stealth အတွက် အကာအကွယ်ယူနိုင်မယ့်အဆောက်အဦး၊ အဆောက်အအုံနဲ့ သဘာဝမြေပြင်အနေအထားတွေကိုရှာပါ။ ပစ္စည်း loots တွေအများကြီးရနိုင်တဲ့နေရာတွေကို အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြီး ကိုယ်နဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ဆော့ကစားပါ။
လက်နက်တွေကိုပိုက်စိပ်တိုက် လှန်လှောရှာနေမယ့်အစား အရင်ဆုံး ကာကွယ်နိုင်မယ့်သံချပ်ကာတစ်စုံကောင်းကောင်းရှာဖို့ အာရုံစိုက်ပါ။ Headshots တွေကိုကာကွယ်ဖို့ မာတဲ့ helmet တစ်စုံရယ် ကျည်ကာတစ်စုံရယ်တို့ရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မှတ်ထားရမှာက သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုယိုယွင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ကျည်လွှဲလေးတစ်ခုပဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပါ။
နောက်ပြီးအရေးအကြီးဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲကတစ်ခု ချမှတ်ဖို့အတွက်ကတော့ : သင်ဟာ Heroic ကိုရောက်ချင်ရင် solo သွားဖို့ပါပဲ။ Kills တွေပိုရဖို့အတွက် အခွင့်အရေးပိုများသလို သင့်ရဲ့မဟာဗျူဟာကိုအပြည့်အဝဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လည်းကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ Solo ဝင်တဲ့အခါမှာ squad နဲ့ plan ချပြီးအကောင်အထည်ဖော်ရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ အထင်လွဲမှားမှုတွေနည်းပါးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းဂိမ်း Late Phase
အခြေအနေတွေတင်းမာလာတဲ့အခါ အနီးကပ်ပစ်လို့ရတဲ့လက်နက်ကိုကိုင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ MP40 ဒါမှမဟုတ် UMP ကိုလိုရမယ်ရမောင်းပါချိန်ထားသင့်ပါတယ် ရန်သူတွေကိုယ့်အနီးအနားကနေထွက်လာပြီး ချောင်ပိတ်မှာစိုးလို့ပါ။ အဲဒီလက်နက်တွေကို မြန်မြန်ပြောင်းလို့ရအောင်ထိပ်ဆုံး slot မှာထားထားပါ။ အနီးကပ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာ ရူးမိုက်တဲ့ jumpshoot အကွက်တွေကိုရှောင်ပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်ကိုချိန်ဖို့အရမ်းလွယ်သလို သင့်ရဲ့ချိန်မှတ်ကိုလည်းပျက်အောင်လုပ်တတ်လို့ပါပဲ။ အကောင်းဆုံးကတော့ သင့်ကိုကောင်းတဲ့နေရာအရောက်ပို့ဖို့ဆိုရင်တော့ လက်နက်အတွဲအစပ်ကောင်းကောင်းလေးတွေသိထားဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ်သတိမမူမိတဲ့ရန်သူပေါ်ထွက်လာရင် မြန်မြန်မသတ်ရမနေနိုင်တဲ့ လက်တယားယားဖီလင်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Rank ဆော့နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုမျိုးမဖြစ်သင့်ပါ။ ဇွတ်မတိုးခင် အခြေအနေလေးကြ ည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့် စနိုက်ပါရန်ကိုလည်းတစ်ချက်ရှိူးပြီး ပိုကောင်းတဲ့အဖြေတွေရအောင်တခြားကိစ္စအဝဝတွေကိုလည်းချိန်ဆပါ။ ဝင်တိုးတာကတော့ အရူးကွက်ပါပဲ။
ကိုယ့်ဘက်ကခံနေရပြီဆိုရင်တော့ မှတ်ထားရမှာက ထွက်ပြေးရင် ဘယ်သူမှသူရဲဘောကြောင်တယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ဒါကဂိမ်းထဲမှာအကြာကြီးဆက်နေနိုင်ဖို့ ရှင်သန်ရေးမဟာဗျူဟာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ Gunfights တွေရှိနေရင်ရှောင်ပြေးမှ ရန်သူတွေထက်တစ်ပန်းသာနိုင်မယ်။ သူတို့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခိုင်းထားပြီးမှ အချိန်ကောင်းကိုအလစ်ဝင်တိုက်ခိုက်ရမှာလည်းဖြစ်တယ်။ အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေဖြစ်လာခဲ့ရင် တွေ့တဲ့ယာဉ်တစ်စီးစီးပေါ်တက်ပြီး အနီးဆုံး safe zone ကိုပြေးသင့်ပါတယ်။
Free Fire က အဆက်မပြတ်သင်ခန်းစာတွေယူနေရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ရှုံးသွားလို့ စိတ်ညစ်စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကိုချိန်တဲ့ skill တွေနဲ့ လက်နက်အပေါင်းအစပ်တွေကိုလေ့ကျင့်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ရွေ့လျားနိုင်စွမ်း( Run နဲ့ Gun ခလုတ်တွေကိုတစ်ပြိုင်တည်းကြာကြာနှိပ်ထားရင် ရပ်တာရောပြေးတာရောပါ ပိုမြန်မြန်လုပ်နိုင်လာပါမယ်) ကို ကိုယ်သန်သလို လေ့ကျင့်ထားနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်။ ဒီထက်မြင့်တဲ့နေရာတွေဆီရောက်တဲ့အထိ လေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ ဆော့ရင်းလုပ်ကြမယ်နော်။
သင့်ရဲ့ Free Fire Diamonds တွေကို Codashop မှာ ပြန်ဖြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆီမှာ ငွေပေးချေခြင်းနည်းလမ်းအများကြီးရှိတဲ့အပြင် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး လျင်မြန်စွာ ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
Next articleWild Rift Patch 2. ရောက်ရှိလာပါပြီ ! Champion အသစ်တွေ, Spectator Mode, နဲ့ အခြားအရာများစွာ